अन्योलता र हुटहुटीले रंगमञ्चमा आए : तुलशा थापा - Everest Daily News
अन्योलता र हुटहुटीले रंगमञ्चमा आए : तुलशा थापा
धरान । काठमाडौं भन्दा बाहिर धरानमा रहेर नाटकमा रमाउने रंगकर्मि तुलशा थापा नाटकमा मात्र नभै केहि चलचित्रमा पनि अभिनय गरेकी छिन । एस.एल.सी.पछि नाट्य यात्रा तय गरेकी थापा सुरुका दिनहरु मा नाटक नबुझि नै आज भन्दा सात बर्ष अगाडी आज आँउछु भोलि देखि आउदिन भन्दै नाट्य कार्यशाला लिइन । यसै गर्दै, भन्दै कहिले नाटकको लत लाग्यो थाहै पाइनन । पछिल्लो समय धरानमै रहेर सक्रिय रुपमा विभिन्‍न नाट्य गतिविधि गरिरहेकि छिन ।
Photo By Gopal Rai
मसँग त्यस्तो ठुलो सपना थिएन । राम्रोसँग पढेर जागिर गर्छु भन्ने लाग्थ्यो । एस.एल.सी दिए पछि पिजँडामा राखेको मैना उम्किन पाँउदा स्वतन्त्र भएर उडे जसरी म पनि उडि राथे एस.एल.सीको नतिजाको पर्खाइमा । त्यति बेला नेशनल एकेडेमिले आयोजना गरेको पन्द्र दिने व्यक्तित्व बिकास तालिममा सहभागी हुदाँ नाटक पनि थियो र नाटकको प्रशिक्षक बिष्णु मोक्तान हुनुहुन्थ्यो र उहाँले नाटक बारे जान्ने बुझ्ने इच्छा जगाइदिनु भयो । उक्त तालिमको क्लोजिङ सेरोमनिमा एउटा नाटक गर्यौ त्यसपछि बिष्णु सरले स्थापना गर्नु भएको रंगभुमि एकेडेमिमा त्यहि नाटक गर्ने साथिहरुसँगै म पनि नाट्य कार्याशालामा सहभागी भए । म यसरी लहैलहै, अन्योलता र हुटहुटीले रंगमञ्चमा आँए । तर, मलाई आज कसैले तेरो खुसि के हो भनेर सोध्यो भने म यही नाटक हो भन्छु ।
कुनै समय धरान नाटकमय थियो रे हामी जन्मिनु भन्दा अगाडि तिर अहिले पनि हामीले दर्शक खोज्नु पर्छ हामीले नाटक गर्दैछौ हेरिदिनु आउनुहोस है भन्नु पर्छ । काठ्माडौंमा धरानबाट गएको नाटक ५० को दशक वरिपरि प्रथम , दुतीय , तृतीय केहि न केहि पुरस्कार जितेर आउँथ्यो रे तर आज ३० बर्ष पछि ८० दशक वरिपरि फेरि धरानको रंगमञ्च बामे सर्दै छ । भर्खर भर्खर धरानले नाटकघर महसुस गर्दैछ । पहिलो कुरा त ५० देखि ७० को दशकको बिचमा धरानमा नाटक मञ्चन नै भएको थिएन अनि थिएटर मात्र बनाएर मात्र पनि भएन, नाटक मञ्चन नै नभएपछि भनेर सायद नाटकघरको आवश्यकता महशुस गर्नु भएको थिएन । तर पछिल्लो समय केहि नाटकहरु मञ्चन भयो साथै नाटकघरको जग उठ्यो । यो हाम्रो लागि सुखद कुरा हो । ५० को दशकको वरिपरि धरानमा सक्रिय नाट्यकर्मिहरु पलायन नभएको भए सायद यतिबेला धरान नाटकको हब हुन्थीयो होला ।
धरानले ७/८ घण्टा कन्सर्ट हेर्न सक्छ जँहा होहल्ला गर्न पाइन्छ तर शान्त भएर हेरिने एक डेड घण्टाको नाटक हेर्न सक्ने धैयर्ता राख्न सक्दैन । धरानमा दर्शक छ तर नाटकको दर्शक छैन । सायद धेरै नाटक मन्चन नभएकोले पनि होला नाटकको दर्शक नभएको , कन्सर्ट प्राय जस्तो भैरहने भएकोले पनि धरानमा कन्सर्टको दर्शक छ ।
धरान भाषा, सँस्कृति कला साहित्यको लागि धनि शहर हो । अब हाम्रो पुस्ताले यो कुरा लेख्‍न/देखाउन सक्नुपर्छ । धरानले अब धरानलाई नै हेर्नु पर्छ । प्राय जसो धरानका नाट्यकर्मिहरुलाई एउटा आरोप लगाएको सुनेको छु ।` धरानमा रहेको नाट्यकर्मी मौसमे नाट्यकर्मि हो यसो बर्ष दुइ बर्षमा एउटा नाटक गर्छ र आफुलाई बरिष्ठ नाट्यकर्मि भन्छ ´ भन्ने आरोप तोड्‍नुपर्ने समय आएको छ ।
पछिल्लो समय साथि भाइलाई भेट्दा धरानमा नाटक कुन हुनेवाला छ ? के हुदै छ ? कहिले नाटक हेर्न पाउँछौ भनेर सोध्नु हुन्छ । यो देख्दा नाटक हेर्ने दर्शक बढेको लाग्छ र दर्शकको उत्सुकता मर्न नदिन निरन्तर नाटक मञ्चन गर्दै जानु पर्छ ।
गरीबलाई रोगले भन्दा भोकले मर्ने चिन्ता
मुख्य समाचार साहित्य/विचार
धरानमा चारतारे झण्डा देख्दा टाउको दुख्नेहरुले सिटामोल खानु